Ny fitsarana Filazana an-Tserasera ny Fomba Hahazoam-Bola ny Filazana an-Tserasera - Ny Mpisolovava rehetra ao amin'ny tontolo izao! Ara-dalàna ny trano fisotroana kafe miaraka amin'ny mpahay lalàna an-tserasera.
Ny Mpisolovava rehetra ao amin'ny tontolo izao! Ara-dalàna ny trano fisotroana kafe miaraka amin'ny mpahay lalàna an-tserasera.
Ny fitsarana Filazana an-Tserasera ny Fomba Hahazoam-Bola ny Filazana an-Tserasera
Ity fizarana ity dia manazava ny fomba hitondra ny olona iray ho kely ny filazana ny fitsarana tany angleteraIzany no manazava ny dingan'ny fandraisana ara-dalàna ny asa sy ny fomba hahatonga ny fitsarana milaza ny vola izay nananan'ny. KELY ny FILAZANA ny amin'ny FITSARANA: ny Fanaovana ny fitsarana milaza ho vola ihany koa ny antsoina hoe 'ny maka olona iray ho kely ny filazana ny fitsarana'.
Tsy ny olona na ny orinasa mandoa vola ianao? Raha izany, dia afaka mampihatra ny iray county fitsarana milaza indray ny vola izay nananan'ny.
Jereo ny fizarana hafa ho an'ny lisitra feno ny amin'izao fotoana izao ny saram-pitsarana ary mba hahitana hoe inona no mitranga rehefa manao fitsarana milaza. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny fampiasana sivily fanelanelanana service dia ho haingana kokoa sy tsy dia lafo. Izy ireo dia mampiasa ny tsy mitanila ny olona 'mpanelanelana' mba hanampy ireo antoko roa ireo hahita vahaolana na hahatratra fifanarahana.
Fanamarihana: Ny dingana mba hahatonga ny aterineto fitsarana milaza ny vola isan-karazany any Ecosse sy any Irlandy Avaratra.
Afaka manao vola filazana an-tserasera raha ny vola no milaza 'tsy voalaza' - izay midika ho raikitra vola. Inona no mitranga raha toa ka milaza ny 'tsy fantatra' ny vola.
Amin'ity tranga ity dia mila ny misintona kely ny filazana ny Endrika N avy HMRC endrika finder.
Toy izany koa milaza endrika mihatra raha tianao ny mampiasa ny dikan-taratasy eny fa na dia milaza ny raikitra vola. Fenoy ny taratasy county fitsarana milaza endrika N ary avy eo dia mandefa izany any amin'ny Faritra Fitsarana ny Vola Filazana Foibe ny adiresy. Ny olona na ny raharaham-barotra ianao no milaza fa avy dia ny 'voampanga' Inona no mitranga manaraka ny miankina na ny voampanga manaiky ny milaza na tsia. Mety manaiky ny filazana sy ny mandoa Fa raha mandà na ny fifandirana ny trosa ianao, dia mety ilaina ny manatrika fitsarana. Avy eo dia afaka mangataka amin'ny fitsarana mba hahazoana ny baiko ho azy ireo mba handoa raha: Fanamarihana: Inona raha toa ka mbola tsy mety mandoa ny. Ny dingana manaraka dia nangataka tamin'ny fitsarana mba haka bebe kokoa ny dingana recoup ny vola. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra ireo dia mampiasa ny fahefana ara-dalàna ny bailiffs mba hanangona ny trosa. Raha manao ny fitsarana milaza ny fampiasana taratasy endrika, dia afaka hifandray ny fivondronan i Fitsarana ny Vola Filazana Foibe fanampiana.
ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA AMIN'NY ASA NY LALÀNA
ЮРИСТЕШ НАЛОГЫМ КОНСУЛЬТАЦИЙ
© 2021 Ny Mpisolovava rehetra ao amin'ny tontolo izao! Ara-dalàna ny trano fisotroana kafe miaraka amin'ny mpahay lalàna an-tserasera.